Vanuatu eo amin'ny làlana hahatongavan'ny fizahan-tany ary manana drafitra mihetsika 2018
Home » Travel Associations News » Vanuatu eo amin'ny làlana hahatongavan'ny fizahan-tany ary manana drafitra mihetsika 2018
Ny fahatongavan'ireo mpitsidika iraisam-pirenena tao Vanuatu tamin'ny alàlan'ny fiaramanidina dia nahatratra 10,877 tamin'ny volana septambra 2017, na ny 39% n'ny fahatongavana iraisam-pirenena rehetra tany Vanuatu.
Izany dia fiakarana 12% raha oharina amin'ny volana mifandraika amin'ny 2016 ary 31% raha oharina amin'ny volana teo aloha. Ny fiakarana dia hita taratra tamin'ny isan'ny mpitsidika tonga vakansy.
Ny sambo fitsangantsanganana na mpitsidika an-andro dia nijoro tamin'ny 16,829 na 61% tamin'ireo tonga iraisam-pirenena tany Vanuatu. Izany dia fiakarana 6% raha oharina amin'ny volana mifandraika amin'ny 2016 miaraka amina sambo fitsangantsanganana 9 amin'ny fitambarany. Ny mpitsidika ny andro dia nidina 5% raha oharina tamin'ny volana teo aloha.
Ny mpitsidika aostralianina dia nanisa ny isan'ireo mpitsidika betsaka indrindra tamin'ny alàlan'ny rivotra tamin'ny 61%; arahin'ireo mpitsidika an'i New Caledonia sy Nouvelle Zélande isaky ny 11%; Mpitsidika eropeana amin'ny 5%; Firenena pasifika hafa amin'ny 4%; Amerika Avaratra amin'ny 3%; Sina sy mpitsidika avy any amin'ny firenen-kafa amin'ny 2% tsirairay ary ny mpitsidika Japoney amin'ny 1%.
Ny mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny rivotra dia nandany 10 andro eo ho eo. Io dia fiakarana 1 andro mihoatra ny septambra 2016 ary koa tamin'ny volana teo aloha. Tanna Island dia mbola mandray mpitsidika betsaka indrindra amin'ny 38%; arahin'ny mpitsidika ny Nosy Santo amin'ny 31%.
Drafitra fizahantany 2018
Ny biraon'ny fizahantany Vanuatu (VTO) dia manana drafitra 'tsara' natokana ho an'ny taona 2018.
Ekipa mavitrika iray ahitana ny Tale Jeneralin'ny VTO, Andriamatoa Adela Aru, Mpitantana Marketing, Allan Kalfabun, Mpanadihady momba ny Fampahalalana sy angon-drakitra, Sebastien Bador miaraka amin'ny mpanolotsaina ara-teknika sy mpiasa dia mampiseho fambara tsara fa hisy fiatraikany lehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany Vanuatu ny taona 2018.
Nambaran-dRamatoa Aru fa ny ekipa sy ny mpiasan'ny VTO dia manana fifandraisana miasa tena tsara amin'ireo mpiray antoka ary niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana mba hanao hetsika amin'ity taona ity mba hampidirana mpizahatany betsaka ao amin'ny firenena.
"Faly izahay manambara fa hanao fampielezan-kevitra lehibe izahay amin'ity herinandro ity miaraka amin'ny Air Vanuatu any Sydney sy Brisbane, Aostralia mandritra ny enina herinandro ary nahombiazan'ny Governemanta Vanuatu, ny governemanta New Zealand ary ny governemanta Australia," hoy izy.
"Air Vanuatu dia miara-miasa amin'ny VTO ary tonga miaraka amin'ny saran-dalan'ny fifaninanana any Australia sy New Zealand izay mahatonga an'i Vanuatu matanjaka kokoa ho toerana iray safidy ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena satria miasa tsy an-kijanona amin'ny Manager Marketing, Allan, mankany hampiroborobo an'i Vanuatu amin'ny tsena isam-paritra sy iraisam-pirenena toa an'i Azia sy Eropa.
"Ny fampielezan-kevitra lehibe amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity dia hanampy amin'ny fanomanana tsena ary hiara-hiasa amin'ny indostria miaraka amin'ny fanohanan'ny sehatra tsy miankina izahay - $ 650,000 ny vola mitentina any Aostralia ary ho an'ny $ 200,000 ny fampielezan-kevitra any Nouvelle Zélande ho an'ny telovolana voalohany."
Naverin'i Andriamatoa Kalfabun fa zava-dehibe ny kendrena ny tsena any amin'ny faritra mba hampiroborobo ny isan'ny famandrihana any Vanuatu izay nahita fanombohana tsara ny taona ho an'ireo mpizahatany sy toeram-pizahantany maromaro ao Vanuatu.
"Izany rehetra izany dia ny fitazonana ny tsy fitoviana ary noho izany dia nahazo tambin-tsakafo tena tsara izahay- noho izany dia nanangana ivon-toerana antso izahay any amin'ny faritany izay hanome daty daty ary hizara amin'ny tambajotra anay momba ny hetsika izay hitranga manerana ny firenena. hanana 'Event Calendar' izahay ary faly izahay fa hahasarika mpizahatany maro kokoa hisafidy an'i Vanuatu ho alehany ary te hiverina izy ireo mandritra ny fialantsasatr'izy ireo, ”hoy izy.
"Tsy mifaninana an-trano ihany no ananantsika fa manana firenena nosy hafa toa an'i Fidji koa izahay ary toerana fialantsasatra dia mila an'io toerana io hanaovana fampielezan-kevitra satria efa niverina nianatra ny ankizy ary mila manomana drafitra ho an'ny fialantsasatra ny ray aman-dreny ka izany no antony mila manao an'ity fampielezan-kevitra ity momba izay atolotry Vanuatu izahay.
"Ny iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny VTO dia ny fanamafisana ireo ivon-toeram-piantsoantsika mba hahafahan'ny faritra lavitra hiditra bebe kokoa hanomezana traikefa maro samihafa izay azon'ny mpitsidika notsidihina fa tsy izany ihany fa hanome data momba ny traikefa sy vokatra hampiasaina koa izy ireo ny mpitsangatsangana ihany fa ny mpizahatany ao an-toerana toy ny fonosana ao amin'ny fianakaviana izay misy any amin'ireo nosy ivelany hatrany amin'ny Nosy Banks. ”
Misy atrikasa ivon-telefaona iray mandeha izao any Santo izay notohanan'ny VTO hampiofana ireo manamboninahitra mitaky ivon-toerana mpiantso mba hahomby kokoa ary hamokatra angon-drakitra ho an'ireo hetsika fizahan-tany ao amin'ny firenena.
Betsaka ny hetsika napetraka izay hotanterahin'ny VTO amin'ity taona ity ary faly sy manantena ny VTO fa hahomby amin'ny sehatry ny fizahantany ny taona 2018.
"Tianay ny hanaiky ny sehatra tsy miankina, indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ary ny fikambanana miaraka amin'ny VTO amin'ny fanohanany eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany na amin'ny vola na amin'ny karazany rehefa miasa miaraka izahay hampandroso sy hamidy an'i Vanuatu amin'izao tontolo izao, ”Namarana ny tenin-dRamatoa Aru.